Ahoana ny fomba hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra | Famoronana an-tserasera
Ny sary iray dia efa milaza zavatra betsaka. Saingy raha ampiarahinao amin'ny teny, na fehezanteny iray koa izy, dia mety hisy dikany kokoa izany. Na izany aza, maro no mihevitra fa, raha tsy mpamorona ianao, dia sarotra be izany, ary ny marina dia tsy misy zavatra lavitra ny zava-misy. anio, ny fahafantarana ny fomba hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra dia tena mora ary misy fitaovana maimaim-poana maro mamela anao hanao izany, anisan'izany ny tambajotra sosialy.
Ahoana anefa no ataonao? Inona no tokony hoheverinao? Raha manana sary be dia be tianao hasiana lahatsoratra ianao nefa tsy nieritreritra an'izany mihitsy satria noheverinao fa sarotra dia ho hitanao izao fa mora kokoa noho ny eritreretinao izany amin'ny fotoana iray.
1 Nahoana no mametraka lahatsoratra amin'ny sary?
2 Fandaharana hamorona sary miaraka amin'ny lahatsoratra
2.1 Fandaharana napetraka amin'ny solosainao
2.2 Media sosialy ho mpamoaka lahatsoratra
2.3 Tranonkala sy fandaharana an-tserasera hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra
2.3.2 Tantarao ity
Nahoana no mametraka lahatsoratra amin'ny sary?
Alaivo sary an-tsaina hoe manana sarin'ny saka mitazana amin'ireo maso midadasika ireo ianao. Ny mahazatra indrindra dia ny mijery ny sary ianao ary amin'ny farany dia mitsiky. Saingy azo antoka fa mampahatsiahy anao zavatra iray isan'andro koa izy io. Angamba amin'ny endrika kely ataon'ny zanakao rehefa maniry zavatra izy.
Angamba ianao manantena an'io saka io hilaza ny teny izay mampahatsiahy anao an'io olona io (na sarimihetsika). Saingy mazava ho azy fa sary izy io ... Amin'ny tenany ihany dia manaitra, fa amin'ny fametrahana lahatsoratra eo dia ny zavatra ataonao dia hamafiso bebe kokoa ny hafatra ary amin'ny lafiny iray kosa, izay mahita azy dia mifantoka amin'izay tianao hoeritreretiny (amin'ity tranga ity, ny olona tsirairay izay mahita izany dia mety hanana hevitra tsy mitovy).
Ny fametrahana lahatsoratra amin'ny sary dia mahazatra, ohatra, ny fanaovana meme (fanatanjahantena, olo-malaza, sns) izay samy manome ny dikan-ny sy ny fandikana ny sary (izay no mahatonga anao hahita be dia be amin'ny lahatsoratra samihafa).
Ary sarotra ny manao izany? Tsy latsa-danja kokoa! Tena mora ny manao izany ary tsy mila manana fahalalana momba ny famolavolana akory ianao vao hanao izany.
Fandaharana hamorona sary miaraka amin'ny lahatsoratra
Amin'izao fotoana izao dia manana programa maro ianao izay manampy anao hamorona sary misy lahatsoratra ao anatin'ny segondra vitsy. Tianao ve ny hanome ohatra anao?
Fandaharana napetraka amin'ny solosainao
Manomboka amin'ireo programa izay mitaky fametrahana mba hiasa. Manana tombony izy ireo fa tsy voatery ampidirina amin'ny Internet ny sary. Ary izany, raha sary manokana izy ireo na tsy tianao hiparitaka amin'ny tambajotra tsy misy fifehezana azy ireo, dia tsara kokoa ity safidy ity.
Amin'ity tranga ity dia afaka Manoro hevitra Photoshop, GIMP na mpanonta sary. Izy rehetra ireo dia manana fiasa manampy lahatsoratra amin'ny sary ary azonao atao ny manova ny karazana endri-tsoratra, loko, habeny, sns. Azonao atao mihitsy aza ny mamorona fiantraikany samihafa amin'ny litera na mamorona gif animated fa tsy sary static.
Manana ny tsy fahampiana izy ireo, ary izany hoe, Tahaka ny maha-tsara azy ireo amin'ny fitazonana ny sarinao ho azo antoka, dia somary sarotra ny fampiasana azy ireo raha mbola tsy nampiasa ireo fitaovana ireo ianao taloha., izay mety hahatonga anao ho sahiran-tsaina sy tsy te hanohy izany. Zavatra ara-dalàna tanteraka izany, saingy miaraka amin'ny fampianarana YouTube dia azo antoka fa ho afaka hamoaka izany ianao satria tsy sarotra ny manampy ilay lahatsoratra. Ny zavatra iray hafa dia raha te-hanampy effet spéciale ianao na mahazo endri-tsoratra tena be pitsiny. Saingy ankoatry ny fametrahana andian-teny sasany sy aloka mba hampahazava kokoa azy ireo, dia tsy hanana olana firy amin'ny ambiny ianao.
Media sosialy ho mpamoaka lahatsoratra
Maro amin'ireo tambajotra sosialy, toa an'i Facebook, no manana ny asany amin'ny fanitsiana ny sary ary afaka manampy kisary, emojis, ary lahatsoratra ianao. Mazava ho azy, dia tsy hanome anao safidy maro, satria tena voafetra, fa ny hanao ny fitaka dia tsy ratsy.
Na izany aza, Tsy iray amin'ireo safidy tsara indrindra ampiasaina noho ny zava-misy fa manana fetra maro ianao rehefa mametraka ny lahatsoratra amin'ny fomba iray.
Tranonkala sy fandaharana an-tserasera hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra
Raha tsy te hanafana be loatra ny lohanao ianao ary hanao sary misy andian-teny ao anatin'ny minitra vitsy, dia tsara ny mampiasa fitaovana sy fampiharana an-tserasera izay mamonjy fotoana betsaka.
Anisan'ireo azonay aroso ireto manaraka ireto:
Iray amin'ireo pejy hampiasana azy io, dia tsy maintsy misoratra anarana, fa mendrika izany noho ny katalaogin'ny sary (maimaim-poana avokoa ireo rehetra ireo mba hialana amin'ny olana momba ny zon'ny mpamorona, ary koa karazana litera 17. Afaka mametraka azy ireo na aiza na aiza tianao, na lehibe na kely, ary mifanaraka amin'ny sary. Inona koa no azonao angatahina?
Amin'ity tranga ity, ity fitaovana ity voafetra kokoa satria ny hany tsy maintsy ataonao dia mametraka fehezanteny iray, izay tianao, ary eo amin'ny farany ambany dia manome safidy maro ho anao (tena tsy mitovy amin'ny tsirairay) ka ho hitanao ny endriny amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Mazava ho azy fa voafetra amin'ny sary vitsivitsy ihany izany, izay midika fa, raha laninao daholo izy ireo dia tsy hanompo anao intsony ity pejy ity.
Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mampiasa ny dikan-teny maimaim-poana izay tsy mila misoratra anarana ary ny hany ataonao dia mampakatra sary ary manomboka manakorontana azy araka izay tianao. Rehefa vita ianao dia manana endri-tsoratra maro azonao apetraka mba hahafahanao mametraka ny fehezan-teny mety amin'io sary io. Noho izany, na dia haharitra ela kokoa noho ny amin'ny pejy hafa aza izany, dia ho endrika saika nataonao hatrany am-boalohany (tahaka ny programa fanitsiana sary izy io fa tsotra kokoa).
Ary raha miresaka programa fanitsiana sary ianao dia manana Pixir, amin'ny dikan-teny maivana na feno. Samy maimaim-poana ary ny iray feno dia miasa toy ny Photoshop. Fa raha tsy manana fahaiza-manao firy ianao dia manoro hevitra ny dikan-teny maivana.
Manana izany ianao sary maimaim-poana ary koa endri-tsoratra maro azo isafidianana ho an'io fehezan-teny tianao apetraka io. Azonao atao ihany koa ny manova ny haben'ny endri-tsoratra, ny loko, ny fitongilanana ary ny endrika maro hafa.
Raha te hanana ianao farafahakeliny 50 safidy azo isafidianana, chromatic fahafaha-manao ary ny sasany miantso ny saina (toy ny litera voalohany toa kisary), dia tsy maintsy manandrana ity fitaovana ity ianao.
Ny hany tokony hataonao dia ny manapa-kevitra amin'ny famolavolana ary izay ihany, raha ny marina dia tsy mila mieritreritra sary akory ianao.
Iray ihany ny tsy fahampiana ary izany dia ny fampiasana azy dia mila misoratra anarana ianao.
Araka ny hitanao dia misy safidy maro hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra. Ahoana matetika no ataonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fomba hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra